Abasetyhini abaninzi bakhononda ukuba izidlo zokulahlekelwa kwesisindo esiphuthumayo azibasizi ukuba zilethe inani. Ukuba unengxaki efanayo, zibuze: ngaba uzama ukunciphisa umzimba kunye nale milo? Ngaba awuhambisani neengcali? Ezona zixhaphakileyo zazo zimbalwa kuphela; Makhe sijonge kuzo ukuze sifumanise ukuba iziphi iimpazamo ezikuthintele ukuba ube ngumnini weefomu ezintle, nangona ukuba ukutya kwakho kukuthe tye.
Intsomi 1. Ukutya okulungileyo kukuyeka ukutya.
Le ngongoma ekhohlakeleyo phakathi kwezinye iifayile ezifanayo malunga nokutya kokulahleka kwindleko. Wafumana udumo "ngokubulela" kwiimpawu zomoya. Ukuthandwa kwale ngqungquthela, ngenhlanhla, ngoku iyancipha, kuba akunakwenzeka ukuba umzekelo wabaninzi abasetyhini (kunye nabasilisa!) Iziphiko ezithatyathwe yi-anorexia zingabizwa ngokubalulekileyo. Akukho ugqirha oza kuphikisana nenyaniso yokuba izithintelo ezidityanisiweyo kakhulu ekugqibeleni zikhokelela kwimiphumo engathandekiyo: xa ubunzima bezinto eziphilayo zifumana ukungabi namandla kwamandla, okokuqala kwindlela ekuzalise ngayo yona, ngelanga, ayikho nje inqatha eoli , kunye ... nezihlunu. Kubandakanya intliziyo. Kwaye ngamapounds angaphezulu, kunye nobunzima obulahlekile ngokula ukutya, banempahla eyahlukileyo yokubuyela ngokukhawuleza emva kokuphela kolawulo "olulambileyo". Kwaye ngamanye amaxesha, nokuba kabini! Ngaba uyayithanda le ndlela yokutya?
Intsomi 2. Ushukela unobuthi.
Ukuyeka iswekile kunzima. Kwaye nangona inkolelo inokwenzeka, ebomini akukho nto imfuneko. Ngenxa yokuba ushukela akuyona into embi njengoko abaculi bezilwanyana abazikhulumileyo besithi ngayo. Kwimeko yobomi benkwenkwezi yamashishini yanamhlanje, kukho uxinzelelo oluninzi kunye noxinzelelo lweentlanzi, okwenziwa iswekile kunceda ukulwa. Enyanisweni kumanani amancinci. Ukuze ungenako ukufumana iipilisi ezongezelelweyo ngenxa yeshukela, khumbula ukuba ayinakudliwa ngaphezu kwama-80 amagremu ngosuku. Oku akusebenzi nje kuphela kwiitayi kunye neesekese; ishukela yongezwa, kwanabancinci, kwiitya ezininzi zokuqala nezesibini, kunye neetchups kunye nexesha lokutya. Ukuba awugulwanga nesifo sikashukela kunye nokutya okukhethayo kufuna ukulahla ngokupheleleyo iswekile, ungayeki ngokukhawuleza. Khumbula ukuba sele sele ebandakanyeka kwiinkqubo zakho zokuxilonga, kwaye ukukhanyela ngokukhawuleza kwakhe kuya kuthusa umzimba. Impendulo ingabonakali kangangoko, ukusuka ekuhlahleni okuphambili kwexinzelelo lwegazi kunye nokuphefumula okufutshane kwinqanaba elongezelelweyo.
Intsomi 3. Isidlo siyadingeka ukuze ulahlekelwe isisindo ngaphandle kokusebenza ngokomzimba.
Ngaphezulu kwesi sikhokelo sowesifazane sihleka sonke isiqingatha esisinyanisekileyo somntu, owaziyo, ungasondli isinkwa, makhe ndikhulule amahlaya ambalwa malunga nantoni na yokutya ukulahleka kokunciphisa umzimba. Kodwa amadoda, ngokukrakra ngokwaneleyo, ungakhathazeki malunga neendlovu zokutya zendlovu, "uyenzela" namhlanje kwi-gym. Kwaye kunjalo le nto xa ibhinqa engazange ilungele kwaye kufuneka iphulaphule imbono yendoda. Nantsi ingqiqo yonyango yokuba kutheni isidlo sakusihlwa seendlovu esilungiselweyo namhlanje asizange siphoxiswe namhlanje kunamafutha angaphezulu kwinquma yalabo abancinci befake umncinci: ukuphakama kobunzima bomzimba emzimbeni, ngokukhawuleza kusebenza iinkqubo zokuxilisa. Ngamanye amazwi, uhlobo lwalo lwakhiwa umzimba womntu ukuqhuba, ukuxuma, ukudonsa, ukunyusa, ukudansa, ukuqeqesha, kodwa kungekhona ukulala embhedeni. Ukuba umzimba awufumani uqeqesho oluyimfuneko, impilo yokuqala iyabuhlungu. Yilapho iipounds ezingaphezulu. Yaye akukho, nokuba isondlo esiphezulu kakhulu, ayiyi kunceda umzimba uze uphume kwiqhekeza kwaye uqale ukwenza i-gymnastics.
Nasi imfihlelo yokuba kutheni zonke "ezimangalisa ukuphilisa ukutshisa kwamafutha" ziyimpumpo encinci yemali. Njengoko ubona, eqinisweni, iresiphi yokuvisisana ayinzima kakhulu: ukutya okunokulinganisela, ukutya okunokulinganisela, kunye nokuzivocavoca kwimeko yokuzivocavoca okanye kwindawo evulekile, oyithandayo? Khetha umdlalo owuthandayo, kwaye uphonsa izidlo ukuze ulahlekelwe ngokukhawuleza kwindlala. Awudingi kwakhona.
Uhambo luphila. Inyaniso engenakuphikiswa iyafaneleka nakweliphi na ixesha.
Ukulungiswa kwesibalo, ukusetyenziswa kokulahlekelwa isisindo
Imigaqo yokugcina umfanekiso ngendlela ephezulu
Iipilates zisebenza nzima
Siyakhula ngentsasa ekuseni! Iinkqubo zokutshaja eziphumelelayo zokulahleka kwesisindo
Imithetho eyisiseko ye-gymnastics yesiqhelo
Ukuzivocavoca kwenziwa ngetambo
Iidlo ezifanelekileyo kakhulu, zibalwa iintsuku ezisixhenxe
Ukuzivocavoca imilenze, izikhwebu kunye neentambo
Jam ukusuka kwi-pomelo
Ziziphi izityalo ezihambelana nempawu ze-zodiac zomoya?
Iidlophu zobuhle kunye nolutsha oluvela esifubeni sikagogo
Nguwuphi umdlalo onokuyidlala nomntwana ngaphambi konyaka?
Indlela yokukhetha i-glass glasses: izicwangciso kunye neengcungcutheko
I-Horoscope yama-Aries-abafazi ngoFebruwari 2017
Indlela yokunyamekela umthi wolonwabo
Iipatakeki zePatato eMinsk
Kutheni abantu besaba abafazi abanentembelo
Iimpawu eziwusizo zamakhowa ase-shiitake
Imvubelo yesonka ye pizza
Camila Bordonaba noBenjamin Rojas
Isaladi yeegg yeesandwich